Ihe osise mbu nke Time Machine si Buwalda - Thrilltalk.com
Home/Kpamkpam/Akpa foto Time Machine nke Buwalda
0 48 Nkeji 1
Ezinụlọ Buwalda mara maka ala ndị na-agagharị agagharị, ha na-eso aga n'okporo ụzọ. Site na nnweta ọhụrụ a, ha nwere mkpokọta 6, na-eme ka ha bụrụ otu n'ime ndị kachasị ibu ndị ọrụ nke Europe na ala coasters.
Na mbu, saịtị ndị French fanyere EDBattraction na Coasterrider enweelarị ike ịnya ịnyịnya na mma a na saịtị nke onye nrụpụta Reverchon.
Ihe na-adọrọ mmasị ugbu a bụ nke ezinụlọ, n'ihi ya, anyị ga-ahụ ọtụtụ foto na foto niile. Onye ama ama mara mma nke ọma Alex Arrow elebara anya na ndekọ ego yana ọ dị mma. Foto ndị dị n'okpuru sitere na Studio Alex Pijl.
Foto ndị ọzọ n'okpuru post a.
Oge igwe Ama
Ebube French bụ nke Reverchon wuru ma ọ bụ otu n'ime ụdị oke ọhịa. Otú ọ dị, nke a abụghị oke anụ ọhịa ọdịnala n'ihi na ejirila ihe akpọrọ "akpụkpọ ụkwụ ịnyịnya" dochiela akụkụ abụọ ahụ.
Astergbọ ala a na-agba ọsọ ga-eru ọsọ ọsọ nke 57,6 km / h ma ọ dị ihe dị ka mita 430 n'ogologo na 13 mita.
Alex Arrow France Reverchon Oge Ngwa igwe